लामो समय मास्क लगाउँदा मृत्युसम्मको खतरा ! – Sidha Onlinepatra
मुख्य पृष्ठ /News/लामो समय मास्क लगाउँदा मृत्युसम्मको खतरा !
कोरोनाको महामारीबाट बच्न चिकित्सकहरु एन ९५ मास्क लगाउने सुझाव दिन्छन् । तर मास्क लगाउँदा लगातार लामो समयसम्म लगाउनु हुदैन । अझ दौडदाँ वा छिटोछिटो हिड्दा मास्क लगाउनु हानिकारक हुन्छ । यस्तो बेला मास्क खोल्नु पर्दछ । घर बाहिर निस्कदा अनिवार्य मास्क लगाएर मात्र निस्कनु होला । तर ध्यान रहोस् यो टाइट लगाउनु हुदैन ।खबरहब
एकैदिन कुवेतमै बिदा भए रञ्जीत र पेसी, फुल्न पाएन मायाको कोपिला